Indlu enechibi elishisayo - I-Airbnb
Indlu enechibi elishisayo
Essaouira, Marrakesh, i-Morocco
U-100% wezivakashi zakamuva unikeze u-Martine izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
I-Villa Zoa, yohlobo lwe-"beldi chic", eqhele ngamakhilomitha ambalwa ukusuka enkabeni yedolobha kanye nenkundla yegalofu yase-Mogador, ihlonipha amanani e-Berber obuciko kanye nezakhiwo, inciphisa imibala ethambile yezindonga zamatshe endawo noma i-tadelakt.
Le ndlu enamakamelo ama-3 ahlala abantu abayisi-6 nengane.
Igumbi lokuphumula linokufinyelela okuqondile ezingadini kanye nedamu lokubhukuda futhi linikeza ikhishi lesimanje, igumbi lokudlela elinobungane, igumbi lokuphumula elithokomele elinendawo yalo enkulu yomlilo kanye nombono wengadi.
Ithala elinomthunzi lifakelwe ukuqinisekisa izikhathi zangempela zokuphumula nokusha. Ingadi evundile kanye nedamu layo elikhulu lokubhukuda elingamamitha angu-14 (elinokuvikelwa kwezingane), elishisiswe ebusika, likumema ukuba uphumule nomndeni nabangane.
Phansi, ikamelo elikhulu lokulala elinendawo yokugezela yalo libheke indawo yokubhukuda. Esitezi sokuqala, igumbi lokulala elikhulu kakhulu elikhulu, igumbi lalo lokugezela kanye negumbi lalo lokugqoka lihlangana negumbi lesithathu lokulala eliphindwe kabili futhi womabili anombono wengadi nendawo yasemaphandleni ezungezile.
U-Saïda no-Abdalah, umpheki wasendlini nomnakekeli bazoba onakho ngesikhathi sokuhlala kwakho.
Ilineni linikezwa (amashidi, amathawula njll.). Ukugcinwa kwezindlu, ukugcinwa kwechibi kanye nengadi kunikezwa nsuku zonke ngabasebenzi basekhaya.
Ikhishi lihlome ngokuphelele. I-Saïda can uma ufisa ukulungiselela isidlo sasemini noma sakusihlwa (10 € ukulungiselela ukudla ngaphandle kwemijaho).
I-TV + DVD player egumbini lokuhlala kanye ne-TV ekamelweni elikhulu lokulala, i-WIFI endlini yonke.
I-Villa Zoe isendaweni yokuhlala ehlanganisa ama-villas nezindlu zezivakashi endaweni ethule. I-villa i-Zoa enganakiwe inombono ongavinjelwe wezindawo ezizungezile zasemaphandleni.
Indlu itholakala ekugcineni kwethrekhi ye-1 km, ifinyeleleka kakhulu.
I-8 km ukusuka e-Essaouira, imizuzu emi-5 ukusuka enkundleni yegalofu enhle kakhulu i-Essaouira-Mogador, amakhilomitha ayi-10 ukusuka esikhumulweni sezindiza kanye ne-15 km ukusuka eSidi Kaouki.
Izitolo eziseduze, Imakethe, ama-souks,
Ukusefa, ukusefa kite, ukusefa emoyeni.
Uhamba ngamahhashi, amakamela ... emabhishi kuze kufike lapho amehlo angabona khona.
Ngitholakala nge-imeyili, i-SMS kanye nefoni ukuze ngenze ukuhlala kwakho kube mnandi ngangokunokwenzeka. Umenzeli wethu wezindlu uzokwamukela lapho ufika.